vzo error [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Internet Problems » vzo error [Problem]
1 vzo error [Problem] on 21st February 2010, 4:08 pm
ကျနော့်စက်မှာ အခု vzo က error တတ်နေပါတယ်... error က division by zero ဆိုပြီးပြနေတယ်.. နောက်ပြီး ဘာမှနှိပ်လို့မရတော့ ဖွင့်လို့လည်းမရဘူး... window က window7ultimate ပါ. တစ်ချက်လောက်ပြောပြပါဦးဗျာ... reinstall လည်းလုပ်ပြီးပြီ... မရဘူး .. ဖိုင်မစုံလို့လားဆိုပြီး အသစ်ထပ်ဒေါင်းပြီး ထပ်သွင်းတာလားမရဘူး... ဘာများဖြစ်နိုင်လဲမသိဘူး... ကူစဉ်းစားပေးပါဦး....
2 Re: vzo error [Problem] on 21st February 2010, 4:15 pm
web cam အလုပ်မလုပ်ရင် division by zero ဆိုပြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်
ရုပ်မပေါ်ပေမဲ့ သုံးလို ့ရမယ်ထင်တယ်
Log in နဲ ့Log out နေရာမှာ blank ဖြစ်နေပေမဲ့ အဲဒီနေရာကို မှန်းပြီး နှိပ်ရင်တော့ ၀င်သုံးလို ့ရတယ်ဗျ
3 Re: vzo error [Problem] on 21st February 2010, 4:24 pm
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ... ဒါဆို webcam ကမကောင်းတာပေါ့... ဒါမှမဟုတ် ဘာကြောင့်လဲဟင်.. ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဟင်....
4 Re: vzo error [Problem] on 21st February 2010, 4:34 pm
Log in ၀င်လို ့ရတယ်ဆိုရင် ပြဿာမရှိပါဘူး
ကျနော်တော့ Web can နဲ ့ပတ်သတ်ပြီး အမှားမရှိအောင်ပြင်ထားစေချင်ပါတယ်ဗျာ
ဒါမှမဟုတ် ရုပ်ပျောက်နဲ ့ချက်ကြည့်ပေါ့..
5 Re: vzo error [Problem] on 21st February 2010, 4:38 pm
ကျနော်အခု ရှစ်တူ နဲ့ ပြောမလို့ ... အဲဒါ အဲဒိ error နဲ့ဆိုရင် တားတားတို့ ရှစ်တူ နှစ်ယောက်ဘဝကို တွေးကြည့်ပါဦးဂျာ... ဒါဆို တားတား webcam ကိုပြန်သွင်းလိုက်မယ်နော် တိုတို...
6 Re: vzo error [Problem] on 22nd February 2010, 5:24 pm
Web Cam Driver ကို ပြန်တင်ကြည့်ပါလား။ ပြီးရင် Hardware Test နဲ့စစ်လိုက်ပြီးမှပြန်သုံးကြည့်အဆင်ပြေမှာပါ။
မပြေရင် တော့ web cam အသစ်ပေါ့ဗျာ။
7 Re: vzo error [Problem] on 22nd February 2010, 7:31 pm
ကျေးဇူးပဲ webcam ကို reinstall လုပ်လိုက်တာအဆင်ပြေသွားပြီ.... ဒါနဲ့စကားမစပ်... အဲဒိကနေကော video ရိုက်လို့ရလား.... ကျနော် photo ပဲရိုက်လို့ရတယ်လေ... အဲဒါ video လေးနဲ့ဆို ပိုကောင်းမလားလို့... ကူညီလို့ရရင်လုပ်ပါနော်.... ဒါလေးနဲ့ အလွမ်းဖြေနေရတာ...
8 Re: vzo error [Problem] on 22nd February 2010, 7:41 pm
Cyberlink Product youcam ဆိုတာလေးသုံးကြည့် မိုက်တယ်...ဗျ။
9 Re: vzo error [Problem] on 22nd February 2010, 7:52 pm
အော်.. အဲဒါတွေက ကင်မရာပေါ်မှာပါတဲ့ functionတွေကိုမူတည်ပြီး လုပ်လို့ရတာတွေကွဲသွားတာကိုး... ဟုတ်လားငါ့ညီ... အကိုကတော့ အခုသုံးနေတာ... logitech ကိုသုံးနေတာလေ... အဲဒါကတော့မရလောက်ဘူးထင်တယ်... အကိုတော့ အကြမ်းဖျင်းစမ်းကြည့်ဖူးတယ်... သေသေချာချာတော့မဟုတ်ဘူး... အကိုထပ်စမ်းကြည့်ဦးမယ်.... ငါ့ညီလည်း ထပ်ပြောပြဦးပေါ့....
10 Re: vzo error [Problem] on 22nd February 2010, 11:04 pm
cam studio ကိုသုံးကြည့်ပါလား.........အခုတော်တော်များများ video tuto: တွေကိုကြည့်ရင် cam studio ကိုပဲသုံးထားတာများတယ် ။ output ကိုလဲ file type အမျိုးမျိုးနဲ့ save လို့ရတယ် ၊ capture လုပ်ထားတာတွေကိုလဲ ပြန် ပြီး edit လုပ်ပြီးမှ သိမ်းလို့ရတယ် ။
11 Re: vzo error [Problem] on 22nd February 2010, 11:23 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2009-07-02
ကို mars က ဒာသံလေးပါ လိုချင်လို့ နဲ့ တူတယ် ...ဟီး ဒီကောင်က voice ကို input ပဲရတယ်ထင်တယ် ..output တွေဆို ဘောက်စ်ဖွင့်ထားမှ ရမယ်..earphone က output ကိုဖမ်းလို့ မရလောက်ဝူး...ပိုကောင်းတာက vzo ကနေ record လုပ်ထားတာကို player တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ ဖွင့်လိုရတာလေး ရှိရင် ဒာစဉ်ပြေမယ် ။ ကိုmars လိုမရတာက window ကြောင်ရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ် window7မှာ ကျွန်တော် တစ်ခါကြုံဖူးတယ် ကျွန်တော်လည်း ဒီ ၀င်းဒိုးနဲ့ ဒီ vzo software သုံးနေတာ ပါ ။ ကျွန်တော့်ဆီမှာ error မတက်ဝူး ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းဆီမှာ တက်တာ webcam ကလည်း ကောင်းတယ် တခြားစက်မှာဆို...တစ်ခြား ၀င်းဒိုးပြောင်းတင်မှ ပဲ ဒာစဉ်ပြေ သွားတော့တယ်..
နောက်တစ်ခုက ကိုmars သုံးတဲ့ ကွန်နက်ရှင်က ဘာ ဒာမျိုးဒာစားလည်း ဒာကို wireless router နဲ့လည်း vzo ကတစ်ခါတစ်လေ ဒာလို ညိပြီး ဖြစ်တတ်ပါတယ်
12 Re: vzo error [Problem] on 23rd February 2010, 8:26 am
အခုလိုအားလုံးဝိုင်းပြီး ပြောပေးကြတာကျေးဇူးပါဗျာ... ကျနော်အခုပြဿနာကို တင်ထားတဲ့ webcam dirver ကော vzo ကောပြန်ဖြုတ် restart ချ ပြီးမှ အားလုံးကိုသေချာပြန်တင်လိုက်တာ အဆင်ပြေသွားပါပြီ...
gtone ပြောသလို အသံကို headset နဲ့ဖမ်းလို့ကတော့ ဟုတ်တယ်မရဘူးဗျ... နောက်ပြီး vzo မှာပေါ်နေတာကို video လိုပြန်ကူးဖို့ကျတော့ သူ့ရဲ့ webcam အမျိုးအစားပေါ်လိုက်ပြီးလုပ်နိုင်တာလေးတွေကွဲသွားတယ်ထင်တယ်... အကိုဟာလေးကတော့ အဲလိုလုပ်လို့မရဘူး...
vzo ကလညး်ပေးထားတာက photo အတွက်ပဲပေးထားတာ.. recording လည်းပေးပါတယ်.. ဒါပေမယ့် အသံက ခုနကပြောသလိုဖမ်းရတာခက်တယ်... ဘာပဲပြောပြော အားလုံးကိုကျေးဇူးပါဗျာ....
13 Re: vzo error [Problem] on 26th February 2010, 4:15 pm
အဲသည်မှာကူးပြီးရင် acmcamp ဆိုလားပဲ Video Camera ပုံလေးနဲ့အဲဒါတင်ပေးပြီးမှ video ကူးလို့ရမယ်။
14 Re: vzo error [Problem] on 18th March 2010, 5:59 pm
vzo မွာပဲ record လုပ္လို႔ရတယ္ေလ take picture ရဲ့ေအာက္မွာ rec ဆိုတာရွိတယ္။ အဲ့ဒါနဲ႔ record လုပ္ထားရင္ ျပန္ၾကည့္လို႔ရတယ္ ဒါေပမယ္ vzo နဲ႔ပဲၾကည္လို႔ရမယ္ေနာ္။
15 Re: vzo error [Problem] on 18th March 2010, 7:44 pm
အွန်လိုင်းဖြစ်မှ ကြည့်လို့ရတာလား... ဒါမှမဟုတ် 0ffline ဖြစ်လညး်ကြည့်လို့ရလားဆိုတာတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါလား... ကျနော် တစ်ခါကူးတုနး်ကတော့ အသံကိုပဲကူးလို့ရတယ်ထင်ပြီး ဆက်မကူးတော့တာ... အဲဒါလေးတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပါဦး... ကျနော်လညး်စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်... ကျေးဇူးပါဗျာ..
16 Re: vzo error [Problem] on 18th March 2010, 9:57 pm
mars wrote: ကျေးဇူးပဲ webcam ကို reinstall လုပ်လိုက်တာအဆင်ပြေသွားပြီ.... ဒါနဲ့စကားမစပ်... အဲဒိကနေကော video ရိုက်လို့ရလား.... ကျနော် photo ပဲရိုက်လို့ရတယ်လေ... အဲဒါ video လေးနဲ့ဆို ပိုကောင်းမလားလို့... ကူညီလို့ရရင်လုပ်ပါနော်.... ဒါလေးနဲ့ အလွမ်းဖြေနေရတာ...
VZO ကနေပြီးတော့ Video ရိုက်လို့ရတယ်လေ .. ဒါပေမယ့် နှစ်ဦးသဘောတူမှပေါ့နော် ... ကိုဆက်စိုးပိုင် ပြောသလို Rec ခလုပ်ကိုနှိိပ်မယ်ဆိုရင် ဟိုဘက်မှာ REC လုပ်မှာလား ..
မလုပ်ဖူးလား .. မေးတယ်ဗျ .. ဟိုဘက်က Yes ပေးမှ လုပ်လို့ရမယ် ..ဆိုးတာက ပြန်ကြည့်မယ် ဆိုရင် VZO နဲ့ ပဲပြန်ကြည့်လို့ရတယ် .. Converter လဲရှိဘူး... ဟီး ..
အသံကတော့ အပေါ်က ပြောထားသလိုပဲ Recording player တွေသုံးကြည့်ပါလား ...
Skype recording နဲ့ဆို ပိုကြည်တယ်ဗျ.. ဒါပေမယ့်အဲကောင်က Trail ပဲရတယ် .. တခြား ဟာတွေ လည်းရှိတယ် .. အဲဒါတွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေပါတယ် ..
17 Re: vzo error [Problem] on 19th March 2010, 4:45 pm
Yes, you can record with voice.
18 Re: vzo error [Problem] on 10th April 2010, 9:04 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-04-08
ကျတော့သုံးနေတဲ့စက်မှာလည်း division by zero ဆိုပြီးပြဿနာတက်ဖူးတယ်
အခုဆို ပြန်တင်တာတောင် တင်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူး
The system administrator has set policies to prevent this installation ...တဲ့
security အနေနဲ့လည်း admin ကနေ ဘာမှလုပ်မထားပါဘူး
19 Re: vzo error [Problem] on 11th April 2010, 8:00 am
linluck wrote: ကျတော့သုံးနေတဲ့စက်မှာလည်း division by zero ဆိုပြီးပြဿနာတက်ဖူးတယ်
vzo ကပြဿနာများများစားစား မရှိဘူးထင်တယ်။ကြုံဖူးသလောက်ပြောတာပါ
Software Installation ကိုပိတ်မထားဘူးဆို သွင်းလို ့ရပါတယ်ဗျ.သေချုာစမ်းကြည့်ပါဦး
သေချာ uninstall ပြန်လုပ်ပြီးသွင်းပေါ့။
20 Re: vzo error [Problem] on 11th April 2010, 9:50 am
ရသွားပြီဗျ... ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာ.... မနေ့ကမှ ရှစ်တူလာလို့ စမ်းကြည့်တာ ဟန်ကျသွားတယ်... vzo နဲ့ပြန်ဖွင့်မှရတယ်ဆိုတာ ဟုတ်တယ်ဗျ... ဒါပေမယ့် offline ဖွင့်လို့ရတယ်လေ... အဲဒိတော့ ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာ... အဆင်ပြေတယ်... ကျေးဇူးပဲဗျို့....
21 Re: vzo error [Problem]